Caafimaadka - AOOD Technology Limited
Saxnimada iyo isku halaynta waa hawlgalka qalabka caafimaadka iyo aaladaha. Dhammaan nidaamyadan, waxay dalab adag saaraan nidaamyadooda hoose iyo qaybaha. Giraanta Slip -ka oo ah qayb elektaroonik ah oo awood u siineysa gudbinta awoodda/ signalada/ xogta qayb taagan si ay u noqoto meerto, waxay muhiim u tahay guusha nidaamka gudbinta oo dhan.
AOOD waxay lahayd taariikh dheer oo ay ku bixisay xalalka giraanta siilka si loogu dalbado caafimaad. Iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda injineernimada ee ugu dambeysay, hal-abuurnimo joogto ah iyo aqoon durugsan leh, AOOD waxay si guul leh u adeegsatay saxsanaanta aadka u fiican iyo siddooyinkii isku-haynta kalsoonida si ay u xalliso awoodda/ xogta/ gudbinta signalada CT-ga, nidaamyada MRI, ultrasound-ka xallinta sare leh, nidaamyada naasaha naasaha, xarumaha caafimaadka, dahaarka saqafka iyo nalalka qalliinka oo iftiimaya iwm.
Kiiska ugu caadisan waa nidaamyada giraanta silbiska dhexroorka weyn ee iskaanka CT. Baadhitaanka CT-ga wuxuu u baahan yahay in laga wareejiyo xogta sawirka sawir-qaade raajo-rogista oo lagu wareejiyo kombiyuutarka habaynta xogta taagan oo hawshan waa in lagu dhammaystiraa giraanta silbashada. Giraantan sibidhka ahi waa inay lahaataa dhexroor weyn oo gudaha ah waxayna ku wareejin kartaa xog aad u badan xawaare sare oo shaqaynaya. AOOD giraanta sibidhka weyn ee dhexroorka ayaa ah midda kaliya: dhexroorka gudaha wuxuu noqon karaa ilaa 2m, heerka gudbinta xogta sawirku wuxuu noqon karaa ilaa 5Gbit/s kanaalka fiber optic -ka wuxuuna ku shaqeyn karaa si kalsooni leh 300rpm xawaare sare.
Alaabooyinka la xiriira: Siddo simbiriirixasho caajis ah oo weyn, Iyada oo loo marayo Sore Slip Sings